विवाह एक विदेशीले वा, ब्राजिल - को देश को आनुवंशिक प्रयोग ब्लग इन्टरनेट क्लब"म विवाहित प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ"
विवाह एक विदेशीले वा, ब्राजिल — को देश को आनुवंशिक प्रयोग ब्लग इन्टरनेट क्लब»म विवाहित प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ»
लागि साइन अप गरेको निःशुल्क मिनी-पाठ्यक्रम, जहाँ त्यो तिनीहरूलाई लिन्छ हरेक दिन बिहे भन्दा बढी बीस महिला: म पहिले गए ब्राजिल, म हुनु पर्छ थियो, नियाग्रा फल्स. यो बाहिर लागे भनेर धेरै छन् उच्च, व्यापक र अधिक सुन्दर झरने. उदाहरणका लागि, यो इगुयाजु बीच सिमानामा ब्राजिल र अर्जेन्टिना हो, जो बीस मिटर लामो र दुई पटक रूपमा व्यापक रूपमा यसको उत्तर अमेरिकी: एक पहाड रियो मा खडा एक विशाल मुर्ति — एक आधुनिक. येशूले बाहिर आफ्नो हातमा भर रियो र सुरक्षा को शहर र यसको मान्छे देखि सबै हानि । माउन्ट»पहाड»- कलिङ कार्ड को रियो, प्रसिद्ध, लगभग दुई-मीटर-उच्च को शीर्ष क्रिस्टल, स्थित छ मा प्रवेश गर्न को खाडी. देखि अवलोकन डेक को पहाडहरू मा, तपाईं आनन्द उठाउन सक्छौं, सबैभन्दा सुन्दर दृश्यहरु को शहर, खाडी, पहाड, द्वीप मा समुद्र, पुल र मुर्ति ख्रीष्टको. तापनि अस्थिर प्राकृतिक सुन्दरता को रियो डी जनेरियो — एक पाँचौ जनसंख्या को (लगभग लाखौं) मा बसोबास. डर लाग्छ-रियो मा बारे यस्तो बस्तियों छ । फरक कानूनी आवास छ, छैन त धेरै बाहिरबाट (हुनत, को पाठ्यक्रम, बाहिरबाट-जो धेरै अक्सर हुन्छन् बर्बाद), तर वास्तवमा-आफ्नो बासिन्दा कर तिर्न छैन, राज्य र तिर्न छैन, आफ्नो बिल. यी मानिसहरू द्वारा बाँच्न सिद्धान्त:»हामी पर्छ हानि छैन, राज्य र हामी केही राज्य देखि छ कि आवश्यक छैन।»पहिलो, व्यवस्था अनुसार, एक घर निर्माण सहन सक्दैन भने, यो निर्माण मा एक राष्ट्रीय पार्क । त्यसैले, अवैध घरहरु थिए भन्ने पनि निर्माण नजिकै तारा, होटल वा नजिकै एक सुन्दर समुद्र तट मा ब्राजील थिए छैन. दोश्रो, जब एक ठाउँमा भन्दा बढी चालीस परिवार बाँच्न, राज्य बिताउनुहुन्छ बिजुली, पानी र अन्य उपयोगिता मा तिनीहरूलाई जोगिन सरसफाइ. तेस्रो, आमा प्राप्त तीस डलर एक महिना लागि प्रत्येक बच्चाको गर्ने नियमित स्कूल (त्यसैले, राज्य तय शिक्षा को स्तर). यस तथ्य छ कि बावजुद पर्यटक डराएका छन् द्वारा प्रतिबद्ध बासिन्दा, पुस्तिका अनुसार, अपराध केवल बासिन्दा चिन्तित छन् । तर हालै, प्रहरी, प्राप्त गर्ने लागूपदार्थको देखि कोलम्बिया र तिनीहरूलाई वितरण गर्न अन्य दोस्रो स्थानीय को रियो फेला, कि तिनीहरूले उपयोगी लागि लागूपदार्थ बिक्री, र पर्यटक छन् राम्रो-क्रमबद्ध । छैन त लामो पहिले, राज्य खोजे अपराधीहरूलाई फसाउन मा राखे र बासिन्दा मा अपार्टमेन्ट, तर तिनीहरूले एक घर भाडामा र घर फर्के. त्यसैले सम्म, सरकार थाहा छैन कसरी यो समस्या समाधान गर्न । जबकि इक्वेडर छ बारे कुल, र प्रत्येक जनजाति, आफ्नो पहिरन, भाषा, र निषेध छन्, जातियता मा अवस्थित छैन ब्राजील मा सबै.
यो मातृभूमि को, छन्, र अधिक प्रकार को विवाह । अक्सर कालो बच्चाको जन्म मा सेतो परिवार जस्तै, एक ठूलो-हजुरआमा वा ठूलो-हजुरबुबा कालो थियो. तपाईं देखेको छु भने ब्राजिलका साबुन ओपेरा»दास», तपाईं देख्न बिल्कुल साँचो र व्यावहारिक परिस्थिति मा यो भावनात्मक श्रृंखला को मान्छे । यो पुस्तिका हामीलाई भन्नुभयो बारे एक कहानी कसरी बासिन्दा थिए कुटपिट माथि समुद्र तट मा एक अभिनेता मा खेलेको गर्ने एक औपनिवेशिक लागि टीवी श्रृंखला उहाँले केही थिएन, विवाह गर्न चाहनुहुन्छ. जब अभिनेता विवाह गरेका थिए कि बिंदु मा वास्तविक जीवन । ब्राजिलका पुरुष छन् भावुक, एक सानो अनुभवहीन, कराउँदै गर्दा तिनीहरूले, प्रत्येक अन्य पूरा र लुकाउन छैन आफ्नो आँसु आनन्द । ब्राजिलका पुरुष प्रेम सेतो बालिका संग स्पष्ट आँखा । आदर्श महिला को सुन्दरता यहाँ छ त-सानो र ठूलो छाती»ब्राजिलका».
हेर्न एक सुन्दर केटी, त्यो
तिनीहरू वफादार छन् पति र अद्भुत पुर्खाहरूले. विवाहित मानिसहरू पुग्न प्रकाश उमेर को बारेमा चालीस वर्ष. बालिका विवाह पछि को उमेर तीस-पाँच । ब्राजील सबैभन्दा ठूलो क्याथोलिक देश विश्व मा, र विवाह द्वारा छन् विवाह यहाँ । समलिङ्गी विवाह यो देश मा धेरै बलियो छ, त्यहाँ छन् केही, र छन् कुनै त्यागेर छोराछोरीलाई । ब्राजील मा, गर्भपतन निषेध छ भने, र एक केटी गर्भवती हुन्छ, त्यसपछि एक मानिस उनको विवाह असफल बिना. यो विश्वास छ कि ब्राजिलियन पुरुष छन् पुर्खाहरूले को शान्ति । सबै भन्दा ठूलो पेशा मा ब्राजिल (तलब) — सैनिक, डाक्टर र वकिल. भने छन् भने कुनै ब्रस, त्यसपछि तिनीहरूले लडिरहेका छैनन्, त्यसैले सैन्य-सुरक्षित र सम्मानित । तर यदि केहि हुन्छ सैन्य, आफ्नो तलब तिर्न हुनेछ आफ्नो पत्नी वा छोरी को लागि आफ्नो जीवन को बाकी. बालिका यहाँ विश्वास मा ठूलो आनन्द को विवाह एक सिपाहीले छ । औसत मा, मानिसहरू मा ब्राजिल बाँच्न धेरै वर्ष को लागि. वृद्ध मान्छे छैन जो विकलांग, धेरै पनि पुरानो उमेर मा, त्यसो गर्न जारी. यहाँ साठी-पाँच वर्ष को उमेर मानिन्छ रचनात्मक को आयु अधिकतम दीप्ति । म को मुर्ति ख्रीष्ट, म कति बुझे म सम्झना आफ्नो तीव्र. र समय, म विचार मिल्यो लिन भिडियो संग साक्षात्कार प्रसिद्ध मानिसहरू गर्न कसरी पत्ता लगाउन र तिनीहरूले कहाँ गर्न चाहन्छु सिक्न सबैभन्दा बारेमा कसरी एक महिला प्रेम प्रेरित गर्न सक्छ एक मानिस ठूलो सफलता र कसरी निर्माण गर्न सुरिलो सम्बन्ध मा परिवार । नमस्कार ।
ब्राजिलका भावनाहरु भिडियो च्याट →